उडेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान दुर्घटना, हेर्नुहाेस प्रत्यक्षदर्शीकाे बयानसहित — Imandarmedia.com
१केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुन लागेको बारे प्रचण्डले गए यस्तो खुलासा, बालुवाटारमा खैलबैला
२मेयर कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई
३नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, २४ घण्टामा कति थपिए ?
४प्रधानमन्त्रीलाई २० हजार जरिवाना, यस्तो छ कारण
५माधव नेपालले यसरी गरे देशभरका आफ्नै नेता कार्यकर्ताको घोर अपमान
६भारतमा एकैदिन भेटिए झण्डै डेढ लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित
७रूपन्देहीलाई हराउँदै पञ्जाव पुलिस विराट गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा
८सकियो तीन दलको बैठक
९बुढानीलकण्ठमा शुरु भयो तीन दलको बैठक
१०२८८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
११जब बूढानीलकण्ठ हिँडेका जसपाका नेताहरु बीच बाटोमै बैठक बसे
१२ओलीलाई साथ दिनेहरु दास हुन- माधव नेपाल
१एमालेमा आफ्नो जिम्मेवारी खोसिएपछि भीम रावलले गरे माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा प्रवेश
२नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार बेपत्ता
३मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय, नेपाल र प्रचण्ड तिनछक
४२८ गतेको निर्णय फिर्ता लिनेबारे बोले प्रधानमन्त्री ओली
५नेपाली कांग्रेसमा गयो पहिरो, सबैले पार्टी परित्याग गरेपछि गाउँ नै एमालेमय
६माओवादी मन्त्रीहरुले बुझे पार्टीले फिर्ता बोलाएको पत्र, क-कसले दिदैछन राजिनामा ?
७लकडाउनको हल्ला चलिरहेकै बेला होटल तथा रेस्टुराँका लागि आयो खुसीको खबर
८माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दियो यस्तो कडा आदेश, देशभर तरंग
९पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका यी नेतालाई पक्राउ गर्ने तयारी भविष्य नै धरापमा
१०एमाले सांसदहरुलाई आयो यस्तो कडा निर्देशन, जारी भयो सूचना
११माधव नेपाल समूहलाई ओलीले हल्लाउनै नसक्ने, विधान हेरेपछि नेपाल पक्ष खुसी
१२काठमाडाैंकाे दक्षिणकालीमा २० र २५ वर्षका २ युवकको शव भेटियो, को हुन् उनीहरु ?
उडेको केही समयमै सम्पर्कविहीन भएको विमान दुर्घटना, हेर्नुहाेस प्रत्यक्षदर्शीकाे बयानसहित
एजेन्सी । इन्डोनेशियाको राजधानी जकार्ताबाट ६२ जना यात्रु बोकेर उडेको एक यात्रुवाहक विमान उडेको केही मिनेटमै समुद्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको ठानिएको छ। श्रीविजया एयर बोइङ ७३७ विमान देशको वेस्ट कालिमान्तान प्रान्तको पोन्टिआनक जाने क्रममा उडेको ४ मिनेटमै रेडारबाट हराएको थियो।
प्रत्यक्षदर्शीहरूले कम्तीमा एउटा विस्फोटन देखेको र सुनेको बताएका छन्। उडानहरूको विवरण राख्ने वेवसाइट फ्लाइटरडारडटकमका अनुसार एक मिनेटभन्दा कम समयमा उक्त विमानले ३ हजार मिटर उचाइ गुमाएको थियो। विमानका भग्नावशेषझैँ देखिने तस्बिरहरू टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
प्रत्यक्षदर्शीहरूले कम्तिमा एउटा विष्फोटन देखेको बताएका छन्। माछा मारिरहेका एकजना व्यक्ति सोलिहिनले बीबीसी इन्डोनेशियाली सेवासँग कुरा गर्दै दुर्घटना देखेपछि आफ्ना क्याप्टेनले जमिनतर्फ फर्कने निर्णय गरेको बताए।
उनले भने: “विमान विजुली चम्किएजसरी समुद्रमा खस्यो र पानीमा पड्कियो। त्यो हामीबाट नजिकै भएको थियो। प्लाइवुडजस्तो एउटा अवशेषले झण्डै हाम्रो पानीजहाजलाई ठोकेको थियो।” विमान बेपत्ता भएको क्षेत्र नजिकैको एक टापुका केही बासिन्दाहरूले बीबीसीलाई आफूहरूले विमानको जस्तो लाग्ने वस्तु भेटेको बताएका छन्।
सो विमानसँग अन्तिमपटक स्थानिय समय अनुसार २ बजेर ४० मिनेट जाँदा सम्पर्क भएको बताइएको छ। देशको यातायात मन्त्रालयले खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ। विवरणहरूका अनुसार बोइङ ७३७-५०० मोडलको उक्त विमान २७ वर्ष पुरानो हो।
तर बीबीसीका व्यापार संवाददाता थेओ लेगेट भन्छन्: “त्यति पुराना विमान अझै सेवामा रहनु कुनै असामान्य कुरा भने होइन।” तुलनात्मक रूपमा कमजोर उड्डयन सुरक्षा रेकर्ड रहेको इन्डोनेशियाका विमान सेवाहरूले एक दशकभन्दा बढी समय युरोपमा उड्नका लागि प्रतिबन्ध सामना गरेका थिए। सन् २०१८ मा त्यो हटाइएको थियो।
पछिल्ला वर्षमा बोइङका ७३७ म्याक्स मोडलका दुईवटा विमान ठूला दुर्घटनामा परेका थिए। तीमध्ये पहिलो दुर्घटना सन् २०१८ को अक्टोवरमा इन्डोनेशियाको लायन एयरको उडानमा भएको थियो जसमा १८९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
भारतमा एकैदिन भेटिए झण्डै डेढ लाख भन्दा बढी नयाँ संक्रमित
भारतमा एकैदिन १ लाख ३१ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण
पार्कमा बसिरहेका मानिसमाथि अन्धाधुन्ध गो’ली प्रहार, एकको मृत्यु, ६ घाइते
न्युयोर्कलाई उछिनेर बेइजिङ बन्यो संसारकै धेरै अर्बपति बस्ने सहर
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले लगायो यस्तो प्रतिबन्ध
मिसेज विजेताको ताज खोसिएपछि हंगामा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित भएका एक तिहाइ मानिसमा यस्ताे समस्या
देशै हल्लिने गरि नेपालमा गयो भूकम्पको शक्तिशाली धक्का, कहाँ हो केन्द्रबिन्दु ?
राष्ट्रपति पुटिनले गरे आफू २०३६ सम्म राष्ट्रपति बन्न पाउने कानुनमा हस्ताक्षर
चीन–ईरानबीचको यस्तो सम्झौताले हल्लियो भारत, अब के गर्लान मोदी ?